Umbuzo Wempendulo nezimpendulo ze-ITIL Exam 2017 - ITS Tech School
I-ITIL Exam 2017 - Umbuzo Wempendulo nezimpendulo
I-ITIL yilungiselelo lemikhuba yokuphathwa kwezevisi ze-IT elungiselela izinsizakalo ze-IT ngezidingo zebhizinisi. Ukwazi ama-rudiments we-ITIL ngale ndlela kubaluleke kakhulu ezinhlanganweni. Isitifiketi se-ITIL sazisa ochwepheshe ngezinhlelo ze-ITIL nokusebenza kwayo. Nazi ezinye izibonelo imibuzo nezimpendulo zokuhlolwa.
I-1. I-ITIL isisiza kanjani ukunciphisa izindleko nokunciphisa izindleko eziphelele zokuthola izimali ze-IT?
Izitshalomali ze-IT kanye nabasebenzi baqeda amathayimithebula abo emsebenzini njengoba umsebenzi ongabhalwanga uthola isidingo phezu komsebenzi ohleliwe. I-ITIL yenza izinhlangano zimise lo mjikelezo futhi zinike amandla abameleli ukuba bagxilise izindleko ezigcwele zokuthola kanye neminye imisebenzi endaweni yabo yobuchwepheshe.
I-2. Ubani okwazi ukukhetha umyalelo wezinguquko ezihlongozwayo ngaphakathi kwenqubo ye-ITIL ehambisana nokuphathwa kokuguqula?
Ukuzikhethela kuvame ukuthathwa nguMphathi Wezinguquko. Uqinisekisa ukuthi izinhloso zifezekisa imigomo yazo ngaphakathi ngangokunokwenzeka futhi zichithe ukulinganiselwa ngokukhulisa izisebenzi zamasamukeli kanye nokusetshenziswa. Ugxila ekuguqulweni kwezinqubo zebhizinisi, izingxenye zomsebenzi, izinhlaka kanye nezinhlaka ezintsha nezakhiwo.
I-3. Iyini ukuhlolwa okwenziwe ngemuva kokuthi ukushintshwa kwenziwe okwenziwe ngokuthi?
Ukuhlolwa kubizwa Ukubuyekezwa kokuPhumelela kokuPhumelela (i-PIR). Lona ukubuyekezwa nokuhlola kwesisombululo sokusebenza esiphelele. Kuyenziwa ngemuva kokusebenza okusebenzayo, kwezinye izimo ngemuva kokuphela komsebenzi. I-PIR ihlola ukwanela kohlaka lokuthuthukiswa ngemuva kohlaka lubekwe esimweni sokudala cishe izinyanga eziyisithupha.
I-4. Iyiphi inqubo ye-ITIL eqinisekisa ukuthi inhlangano iyazi mayelana nemisha entsha neyashintshayo?
Ukuphathwa kwamakhono kuqinisekisa ukuthi inhlangano ihlala ikhumbula ukushintsha kwemisha. Iqinisekisa ukuthi uhlaka lwe-IT lufinyeleleka ngesikhathi esifanele emvuthweni olungile ngezindleko ezifanele ngokusebenza kahle.
I-5. Uma kungenzeka ukuthi uMphathi weNsiza weMisebenzi udinga ukuqinisekiswa mayelana nokuthi ngaphakathi ku-Service Desk yangaphakathi uzophendulwa yini ukukwazi ukulinganisa amakholi ngaphakathi kweminye imizuzwana ye-10, lapho umbiko wesivumelwano Sesevisi kulesi sidingo sizorekhodwa?
Kukhona isivumelwano esibizwa ngokuthi isivumelwano sezinga lokusebenza (i-OLA) esichaza ukuthi i-IT bunches ehlukile kanjani inhlangano ihlela ukuhambisa isevisi noma ilungiselelo lezinsizakalo. Kuhloswe ukuba kuqaphele izinkinga zezitoreji ze-IT ngokukhombisa ukulungiswa kwezinqubo kanye nezinkonzo ze-IT okufanele zenziwe yiwo wonke amahhovisi.
I-6. Yiziphi izinqubo ezimbili zokuphatha izinsizakalo ezisebenzisa isu lokuphatha kanye nokuhlolwa kweengozi?
Lezi zinqubo ezimbili ziyi-IT Service Continuity Management kanye Nokuphathwa Ukutholakala.
I-7. Chaza imigomo yesevisi, i-Service inventory kanye nephayiphi yesevisi.
Iphothifoliyo yesevisi: Lokhu kubonisa izinsizakalo ezihlinzekwa ngumhlinzeki wensizakalo ehamba phambili phezu kwamakethe kanye namakhasimende ahlukahlukene. Ukuphathwa kwePhothifoliyo yesevisi kusebenzelana nephothifoliyo yesevisi. Iqinisekisa ukuthi umhlinzeki wenkonzo unamasevisi okuhlangabezana nemiphumela ebalulekile yebhizinisi ezingeni elifanele lokucabangela.
Inkomba yenkonzo: Lena yi-subset yephothifoliyo yesevisi. Irekhoda izinsizakalo ezilungiselelwe ukunikezwa kumakhasimende. Inkomba yenkampani ye-IT ibhalela amafa omusha afinyelelekayo kanye neminikelo yenkampani.
Iphayiphi yesevisi: Ihlanganisa amasevisi asebenza kuwo. Ikhuluma ngezinsizakalo zesikhathi esizayo ezenziwa nangokusetshenziswa komhlinzeki wenkonzo.
I-8. Chaza i-CMIS, i-AMIS ne-KEDB.
Uhlaka lolwazi lokuphathwa kwamakhono (CMIS): Yilungiselelo le-IT lwazi, amandla okusebenzisa, nokusebenzisa ulwazi oluhlangene futhi lugxile okungenani ulwazi olulodwa.
Uhlaka lokwaziswa lokuphathwa kokufinyeleleka (AMIS): Liyindawo yokugcina yonke imininingwane yokuLawula Ukutholakala ihlukaniswe ezindaweni ezihlukahlukene zomzimba.
Idatha yedatha yokuziphutha (KEDB): Impikiswano eyaziwayo yinkinga nomshayeli oyinhloko orekhodiwe kanye nomsebenzi ozungezile. Izakhi ezicashile ezikhona ezilotshiwe zilotshwe ku-database ye-blunder eyaziwayo.
Kunqunyelwe ukuya ku-ITIL ukuqeqeshwa ukuze abantu abafuna ukuthola ithuba lokuxhuma nabafundisi abanomusa futhi ngalezi zindlela zikhula ngokwanele isisekelo sabo solwazi.Qaphela Imisebenzi Yomsebenzi ngokulandela Ukwenza I-ITIL Certification.